Valan-javaboary any Sri Lanka: fanombohana vaovao ve ny asa aorian'ny COVID-19?
Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Valan-javaboary any Sri Lanka: fanombohana vaovao ve ny asa aorian'ny COVID-19?
Ny mitohy ankehitriny Areti-mifindra COVID-19 dia nandohalika ny fizahan-tany sy ny fizahan-tany ao Sri Lanka sy eran'izao tontolo izao. Miaraka amin'ny curfews lava sy fameperana henjana amin'ny fivezivezena, saika nakatona avokoa ny orinasa rehetra. Nikatona efa ho iray volana izao ny valan-javaboary any Sri Lanka.
Misy ny tatitra momba ny bibidia mankafy ny fahalalahana tsy voakorontana izay iainany tampoka. Ny tontolo voajanahary amin'ny ankapobeny koa toa nihodina ho amin'ny tsara kokoa. Tsy any Sri Lanka ihany, fa manerana an'izao tontolo izao, dia hita fa ny natiora dia afaka manasitrana ny tenany, raha omena toerana sy fotoana vitsivitsy.
Fantatry ny besinimaro fa tao anatin'ireo taona lasa taorian'ny fampandrosoana haingana taorian'ny ady, dia nanararaotra ny fananantsika voajanahary sy ny bibidia amin'ny anaran'ny fizahan-tany izahay saika teboka iray tsy misy fiverenana, amin'ny alàlan'ny be loatra sy ny fitsidihana be loatra. Nanenjika be loatra noho ny kalitao izahay.
Ity fomba fizahana fizahan-tany ity dia nahatonga ny fanehoan-kevitra tsy marim-pototra tao amin'ny media sosialy momba ny traikefan'ny mpizahatany momba ny zaridainam-biby any Sri Lanka. Ny fitohizan'ny sehatra «asa toy ny mahazatra» dia hiantoka ny fahafatesan'ny indostrian'ny fizahan-tany dia amin'ny fotoana maharitra. Na dia manana tanjaka ara-toekarena goavana aza ny fizahan-tany miaina any Sri Lanka, dia tsy tokony hampiroboroboana izany amin'ny vola lany amin'ny fiarovana.
Ny fiarovana ny fananantsika voajanahary izay hiantoka ny faharetan'ny indostrian'ny fizahan-tany dia. Na izany aza, ny bibidia any amin'ny ankamaroan'ny valan'arom-biby malaza ao amin'ny firenena dia niharan'ny herisetra sy voaroaka noho ny fitsidihana mahery vaika. Ary ny tena antony nahatonga izany dia ny fihetsika tsy tompon'andraikitra amin'ny mpamily safari amin'ny tsy fanarahan-dalàna mibaribary sy ny tsy fahafahan'ny Departemantan'ny Wildlife Conservation (DWC) hampihatra ny lalàna sy ny filaminana ao anaty vala.
Fotoana mety izao hamafana ny vatolampy ary hanomboka vaovao miaraka amin'ny torolàlana sy fitsipika mety amin'ny fampiasana ireo valan'arom-biby.
Misy sosokevitra vitsivitsy omena etsy ambany.
Fitsipika ho an'ny mpamily rehetra sy ny mpamily Safari Jeep
Ireo lalàna ireo dia tsy maintsy ampiharina mafy raha vao misokatra ny valan'aretina bibidia ho an'ny mpitsidika. Ny tsy fanarahana ny iray amin'ireto manaraka ireto dia mety hiteraka sazy na fampiatoana ny mpamily na ny mpitsidika voakasik'izany. Ny DWC dia tsy maintsy omena fahefana feno hampihatra ireo lalàna ireo nefa tsy misy fanelingelenana avy amin'ny loharano ivelany.
Ferana fetra farany ambony 25 km / ora ao anatin'ny valan-javaboary
Tsy misy sakafo ho entina ao amin'ny valan-javaboary raha tsy amin'ny fitsidihana tontolo andro
Tsy mifoka na misotro toaka ao anaty valan-javaboary
Tsy mitabataba na miantsoantso
Tsy misy sary flash
Tsy manenjika biby hahazoana fahitana tsara kokoa
Tsy misy olona mitangorona manodidina ny biby hijerena tsara kokoa. 5 minitra farafahakeliny isaky ny fijerena izay manome lalana ny hafa.
Mandeha amin'ny lalana voatondro ihany (tsy mandeha an-dàlana)
Notarihin'ny zavatra asain'ny mpikaroka (ranger) hataonao
Tsy manakaiky biby loatra ary manelingelina azy
Tsy midina avy ao anaty fiara na miakatra amin'ny tampon-tampon-fiara
Mba hiantohana ny traikefa ho an'ny mpitsidika tsaratsara kokoa, ny DWC dia tokony handray andraikitra avy hatrany hanomana drafitra fitantanana mpitsidika amin'ny antsipiriany miaraka amin'ny hetsika fohy, salantsalany ary maharitra. Tokony hatao izany ho an'ireo valan-javaboary be mpitsidika (Yala, Uda Walawe, Minneriya, Kaudulla, Wilpattu, ary Horton Plains)
Ity drafitra fitantanana mpitsidika ity dia tokony hampiditra ireto hetsika manaraka ireto farafaharatsiny:
Rafitra iray tsy mitongilana ao anatin'ny valan-javaboary raha azo atao ka mihena ny fitohanan'ny fifamoivoizana
Voninkazo hafainganam-pandeha amin'ny arabe be fivezivezena ao anaty valan-javaboary hahazoana antoka ny fanarahana ny fetran'ny hafainganana
Raha heverina fa manana mpiasa tsy ampy ny DWC hiaraka amin'ny fiara rehetra miditra amin'ny valan-javaboary iray, farafaharatsiny fiara DWC iray hitety ny valan-tsambo eo anelanelan'ny 6 maraina-10 maraina ka hatramin'ny 2 hariva-6 hariva, isan'andro, raha mihoatra ny 50 ny isan'ny fiara hitantanana be loatra amin'ny fahitana ny bibidia sy ny fanarahana ny lalàna sy ny lalàna mifehy ny valan-javaboary
Ity drafitra ity dia tokony hamboarina mandritra ny vanim-potoanan'ny "hidin-trano", miasa amin'ny Internet, ary ho vonona hampiharina miaraka amin'ny fahazoan-dàlana hitsidika ireo valan-javaboary.
Dr. Sumith Pilapitiya koa dia nandray anjara tamin'ity lahatsoratra ity.
Voan'ny Etazonia, Israel, Palestine! Ahoana ny fomba hivelomana? Vehivavy 3 no mizara ny tantarany
Famintinana Trump COVID-19: Ho an'ny Amerikanina sa fampiroboroboana tena?